Ugqatso lukaWilliam Hill
888 uphononongo lwezemidlalo
I-Luckia yekhasino ye-PT ihlaziywe kwaye inikezela igama elihle kakhulu, Oko kuthetha ukuba yekhasino enkulu. Kwisifundo sethu, sithathele ingqalelo isikhalazo somdlali, uqikelelo lwenzuzo, ilayisensi eyiyo, umgangatho wenkonzo, iimeko, izibonelelo kunye nemida yokuhlawula kunye nezinye izinto. Apha ngezantsi, funda ibali kunye neenkcukacha …
I-Suertia Casino yahlalutya yasinika igama elihle kakhulu, Oko kuthetha ukuba yikhasino elungileyo kakhulu. Ngokombono wethu, phanda izikhalazo zomdlali, izibonelelo zoqikelelo, ilayisensi, ukunyaniseka kwetafile, abathengi abanenkonzo esemgangathweni, ilizwe, iimarike zenzuzo kunye …
Phakathi kweendawo ezahlukeneyo zokudlala ezidumileyo kwiminyaka yakutshanje, mhlawumbi ngaphezulu kukaWilliam Hill. Kunzima ukungaqondi ukuba kutheni ukuba sikholelwa kumgaqo wokuba ungomnye wemidlalo yakudala yamathuba. Eli nyathelo libe liziko elidumileyo eParis phakathi 2000, ukuqala kwakhe ukuba …